Xiisada siyaasadeed ee ka taagan Galmudug oo kacsan iyo C/kariin Guuleed oo ka dhoofay Cadaado - Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Xiisada siyaasadeed ee ka taagan Galmudug oo kacsan iyo C/kariin Guuleed oo ka dhoofay Cadaado
Wararka naga soo gaaraya magaalada Cadaado ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in ciidamada nabad-sugidda maamulka Galmudug ee NISA oo ku sugan halkaasi ay haatan ilaalo aad u culus ka haayaan Hoteelada halkaasi ku yaala.
Warqad qoraal ah uu ku saxiixnaa wasiiru dowlaha arrimaha gudaha iyo dowladaha hoose ee maamulka Galmudug ayaa la sheegayaa in maanta loo kala diray bahda saxaafadda iyo hoteelada ku yaala magaalada Cadaado, waxaana lagu amray inaan la qaban karin islamarkaana aan la tabin karin shirar aanay fasixin madaxtooyada Galmudug.
Xildhibaanadii dhawaan shaaciyay inay xilka ka qaadeen madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed oo maanta shir ku yeeshay magaalada Cadaado ayaa weli ku adkeysanaya inay sameyn doonaan guddi doorasho.
Arrintaasi ayaa kicisay xiisad aad u weyn, iyadoona magaalada Cadaado ay caawa kacsan tahay islamarkanaa si gaar ah ay ciidanka nabad-sugidda ee Galmudug isha ugu haayaan dhaq-dhaqaaqa ay sameeynayaan xildhibaanada sida weyn uga soo horjeeda madaxweyne C/kariin Xuseen Guuleed.
Dhinaca kale, madaxweynaha maamulka Galmudug C/kariin Xuseen Guuleed ayaa gelinkii dambe ee maanta dib ugu laabtay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya, isagoo aan weli wax xal ah ka gaarin kacdoonka siyaasadeed oo ay magaalada Cadaado ka wadaan qaar ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya.
Lama oga sida ay ku dambeyn doonto xiisadaha siyaasadeed ee ka taagan magaalada Cadaado, waxaana weli socda wada-hadalo la doonayo in xiisadahaasi lagu dajiyo.
Warar hoose ay warbaahinta Bulshoweyn heleyso ayaa sheegaya in madaxweyne Guuleed uu Muqdisho u aaday si uu la tashi ula soo sameeyo mas’uuliyiinta dowladda xilligeeda dhamaaday oo uu ugu sareeyo madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.